Aya ndiwo akahwina-mubairo akateedzana pa2022 Golden Globes | Bezzia
Maria vazquez | 13/01/2022 12:00 | Nhau
La 79th edition yeGolden Globes, Hollywood Foreign Press Association Awards, yakaitwa muna Ndira 10. Pakanga pasina kapeti tsvuku kana gala sezvazvingatarisirwa uye kuendesa kwakaderedzwa kuita chiitiko chakavanzika umo vanokunda vakaverengwa.
Mushure mekupomerwa kwehuori uye kushaikwa kwekusiyana-siyana, Golden Globes yakaparadzirwa nekusakendenga kukuru zvisinei nekuti vezvenhau havana kuzeza kudzokorora vakakunda. Uye muchikamu cheTerevhizheni kwave neimwe isingarambike: HBO's 'Succession'
3 Iyo yepasi pechitima njanji
Succession ndiye ainyanya kufarirwa muchikamu cheterevhizheni haana kusiya asina chaakabata. The HBO mhuri yemutambo Iyo haina kuhwina chete iyo Goridhe Globe yeakanakisa dhirama akateedzana asiwo mibairo miviri yevatambi vayo: Sarah Snook, weakanakisa anotsigira mutambi, uye Jeremy Strong weakanakisa dhirama mutambi.
The series inorondedzera Roy Mhuri Matambudziko, Logan Roy nevana vake vana. Aimbove ane mubatanidzwa wemakambani enhau nezvinovaraidza ayo vana vake vana vanotorota kuti vatore nhaka. Saka nhevedzano inoteedzera hupenyu hwavo pavanenge vachifunga zvichange zvakaita ramangwana kana baba vemhuri vasiya kambani. "
Fiction yaAdam McKay yakakwikwidza muchikamu chayo ne 'Pose', 'The squid Game', 'The Morning Show' uye 'Lupin', asi izvi hapana chavaigona kuita vachipokana neiyi yakasanganiswa nhevedzano ine mwaka wechitatu, uzere nekukatyamadza uye kusaina kutsva, yasiya varatidziri mamiriro akaoma zvikuru.
Hacks yakaiswa se best comedy yegore pamberi pekuda kwaTed Lasso. Iwo akateedzana anga achitungamira epamusoro emhando yepamusoro yegore kwemwedzi, asi hazvisati zvasvika Zvita 15 apo kuSpain takawana mukana wekuzviona kuburikidza. HBO Max.
Zvitsauko gumi zvinoumba mwaka wekutanga wenhevedzano ine zvitsauko zvisingasviki maminetsi makumi maviri nemashanu pakureba. Yakagadzirwa naLucia Aniello, nyeredzi dzakateedzana macomedians maviri anotarisirwa kunzwisisana. Deborah Vance, monologue diva anoisa pashow husiku hwese hwegore paLas Vegas kasino, ari kune rimwe divi rechirongwa. Ava Daniels, chivimbiso chechidiki chekuseka basa rake rakapfupikiswa mushure me "tweet" inosuruvarisa, kune imwe.
Akatarisana nekudzimwa kwedzimwe nhamba dzake, Deborah Vance, anoridzwa naJean Smart, anomanikidzwa kubvuma rubatsiro rwemutsva Ava Daniels, anoridzwa naHannah Einbinder. Hukama huri pakati pavo Zvichava zvakaoma pakutanga, asi zvichava nani here?
Iwo akateedzana akatanga muUnited States muna Chivabvu 13, 2021 akahwina mibairo mitatu paEmmy Awards yekupedzisira, iyo yave kuwedzerwa iyo Goridhe Globe yeakanakisa komiki kana mimhanzi inoteedzana. Uchazvipa mukana here?
Iyo yepasi pechitima njanji
Kubva mubhuku rezita rimwe chete Kubva kuPulitzer-akahwina Mubairo Colson Whitehead uye akagadzirirwa diki skrini naBarry Jenkins, Oscar-akahwina director weMoonlight, The Underground Railroad akahwina maminiseries epamusoro paGolden Globes.
Iyi Amazon Prime Vhidhiyo miniseries inotisuma kuCora (yakaridzwa naThuso Mbedu), muranda anotiza kubva mumunda maanogara uye anofamba nemumatunhu akasiyana nekuda kwechitima chisinganzwisisike chepasi pevhu. Pfungwa yakarongwa naWhitehead kutsanangura nzira yakarongeka yaiita kuti zvive nyore kuti varanda vasvike kurusununguko rwavo.
Uye ndezvokuti pakutanga kwezana remakore rechiXNUMX, nerubatsiro rwevaya vaipikisa uranda, a chakavanzika network kubatsira kutungamira nhapwa kumatunhu akasununguka enyika. Nokudaro, pakati pe1810 ne1862 iyi network ye "vatyairi" uye "vakuru vezviteshi", vanhu vakatungamirira uye vanhu vakavanza vapoteri mudzimba dzavo, maererano, inofungidzirwa kuti vanenge 100.000 XNUMX vanhu vakaponeswa.
Pamusoro pekuratidza zvisizvo hupenyu hwevaranda paminda, kuzvipira kune mashiripiti echokwadi kuunza zvinhu zvine simba zvinobvumira kuvaka mabhiriji pakati pekare neazvino ehupenyu hwenharaunda yevatema vekuAmerica.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » Aya ndiwo akahwina-mubairo akateedzana pa2022 Golden Globes
Dombo jena: Chigadzirwa chenyeredzi cheimba yako